Izimonyo Israeli Christina: Izibuyekezo
Ikhwalithi ephezulu bafunde nangendlela engokwemvelo izithako libhekene Israeli Christina izimonyo. Uphenyo cosmetologists professional ziphakamisa eziningi izici ezinomthelela ukukhiqizwa okusheshayo imiphumela emihle kakhulu uma isetshenziswa njalo.
Ngo-1982, beautician uChristine Zehavi wanquma ukuthuthukisa izinqubo zayo, ukubenza ngempela eliphezulu futhi ngempumelelo. Uchungechunge lokuqala wadedelwa ejenti abakhathalelayo - izimonyo Christina, okuyinto impendulo wenziwa ngomfutho ngokudalwa ezahlukeneyo ezintsha zemikhiqizo, intandokazi ladies babo bonke ubudala. It uyakwazisa nokucwala nasemitholampilo yezimonyo, futhi muva nje waqala ngempumelelo ukusebenzisa ekhaya.
Cosmetologists bakholelwa ukuthi lo izimonyo kuyisinqumo esingcono kakhulu, futhi banyathelisa ezibalulekile Ngokombono wabo, izici:
Christina umugqa simele enhle ngokuphelele okufana professional ukwakheka abakhethiwe okuhloswe ukuthola umphumela omuhle;
awunankinga ukuba zonke izinhlobo isikhumba, libhekene ezihlukahlukene amathuluzi kanye izimpi okuhamba phambili nganoma iluphi ushintsho olumayelana ubudala;
elisetshenziswa izinqubo yezimonyo ku rejuvenation kuqalisa cishe ngokushesha;
kungenzeka ukuba ukusetshenziswa ekhaya, imbangela ikhwalithi tekubukana ekuxazululeni izinkinga zale mbali.
ukuthuthukiswa Kuncono idatha izimonyo ivumela noma iyiphi intombazane ucinga uchungechunge efanele ukwelashwa, wadala nazo zonke izici isikhumba sakhe.
Sea Ukuzifihla Green Apple Engamakhambi Nobuhle
Christina izimonyo ebusweni ikuvumela ukuba ukunakekelwa salon ekhaya. Ngokuphawulekayo sibhekane ngokuphumelelayo imaskhi umsebenzi oily futhi inhlanganisela izinhlobo isikhumba Sea Engamakhambi Nobuhle imaski Green Apple.
Leli thuluzi ligcwele hydrogenating izinto kakhulu asebenzayo ekhuthaza sokuvuselela qualitative kwesikhumba, kanye eziyinkimbinkimbi izingxenye zemvelo hydrates kanye nemisindo. Izinzuzo umkhiqizo yezimonyo lifanele lifake hlangana:
ezimnandi ukungaguquguquki alube;
Ukwakheka zemvelo ezikhishwe izithelo amakhambi;
okuqukethwe Olufile nosawoti;
Ukuzifihla Sea Engamakhambi Nobuhle Ukuzifihla Green Apple kunomphumela omkhulu: aqede iphinde ivimbele noma yiluphi uhlobo uyaxebuka, uyasondla, engashiyi okunamafutha, kwenza isikhumba esithambile futhi tender. Izindleko kwezimali kuyinto ruble 450.
Forever Young silungisa Night Cream
Izimonyo "kusho uChristina" uyakwazi ukubhekana nezinguquko ezihlobene nokukhula. Ebusuku ukhilimu Forever Young silungisa Night Cream - ubufakazi engcono. Igama layo okuhambisana ngokugcwele imiphumela eyatholakala emva isicelo. Ukulungiswa kuhlanganisa izingxenye ezihambisa ukubuyekeza futhi isikhumba rejuvenation: shea ibhotela, ukwatapheya izithelo akhiphe, ngengcina yezinyosi kanye urea.
Ukuthungwa ukhilimu aminyene, ithenda, ngemva isicelo kahle amuncwa umzimba, kukhona ifilimu esikhumbeni. Muhle Kunconywa ihora ngaphambi sokulala. ukhilimu izithako ukungena izingqimba ezijulile, kusebenze izinqubo ukuvuselelwa kumaseli, okuholela yakamuva olusha kahle. Fading uyaxebuka, smoothes emphethweni ezijulile Nasolabial. Ikakhulukazi nomphumela omuhle siyenzeka ekuseni - isikhumba kubonakale firmer, ubukeka omanzi kakhulu futhi fresh.
Umphumela ngokuphelele iqedwe iqine egcwele imibimbi emihle, uma esetshenziswa njalo, zinyamalala iba appreciable emva kwezinsuku 4-5. Imbiza ukhilimu 50 ml izindleko isilinganiso 2000 - 3000 ruble.
Sea Mud imaski Engamakhambi Nobuhle Dead
Ochwepheshe bakholelwa ukuthi nezinkinga isikhumba ezahlukene (ukuqubuka ngokweqile, ukuvuvukala) is hhayi ncamashi olwisana izimonyo Christina. Izibuyekezo Umthengi abonisa izakhiwo zalo ezilandelayo:
ukuzinza egcwele nezindlala sebaceous;
sokuvuselela qualitative kwesikhumba, elihlanza kusukela ubudala amaseli isikhumba esifile;
ukususa fat ngokweqile, ukuvalwa kwendawo lakhulisiwe ikhule ezimbotsheni;
Ukungena izithako nenzuzo zibe izingqimba ezijulile le epidermis,
toning isikhumba, ukudedela ukucindezeleka bemisipha.
Mud imaski Sea Mud imaski Engamakhambi Nobuhle Dead ibekwe njengoba lamathuluzi ngempumelelo kakhulu ekulweni psoriasis futhi seborrhea. Umuthi likhandelwe oily futhi athambekele greasiness ngokweqile kwesikhumba. Lapho zisetshenziswa kahle, isicelo ku ahlanzekile isikhumba ungqimba nokukhuthazela ezinhle imizuzu hhayi ngaphansi kuka 20, umphumela ephawuleka cishe ngokushesha.
Sebenzisa izindlela kufanele kube ukuthola umphumela oyifunayo, okuzokwenza ukuzibonakalisa emva zokusebenza ambalwa. Ukuze kwenziwe ngcono imaskhi endaweni ebusweni kufanele embozwe izicubu manzi yezimonyo. Inani iyunithi umkhiqizo ngamunye zokhahlamba kusuka 2000 kuya ruble 2300.
Bio Phyto uyaxebuka
"Kusho uChristina" izimonyo Israeli, elinesimo sokuvuselela yibhange bobusha. Ubufakazi lokhu biofitopiling uyakwazi:
sivuselele futhi podnyatut ngisho isikhumba ukhathele kakhulu,
uvuselele, susa spider emithanjeni,
ukuqeda imibimbi emihle.
Bio Phyto uyaxebuka ngempela ukonga: eyodwa Imbiza 75 ml kwanele izifundo eziningana. Lapho usebenzisa i-ukuluma kancane. Kunconywa ukuba isetshenziswe izikhathi 2-3 ngesonto inyanga. Khona-ke ungasebenzisa njalo, njengoba isilinganiso izifo.
Fluoroxygen + C hlandla Khuhla
Skin izimonyo Christina liqukethe eziningana izindlela ukubaluleka ngezithako zemvelo, phakathi okuyinto ikakhulukazi walulama yokuhlanza abasizi khuhla ebusweni Fluoroxygen + C hlandla Khuhla. Ngo ekwakhiweni wabeka yakhe ascorbic acid kanye ezisawolintshi, okuyinto ndawonye unikele kakhulu ukuhlanzwa umphumela kanye amakhorali lula.
Luhle isikhumba ebucayi, ukukhuthaza ukuqedwa mnene futhi ngokucophelela amangqamuzana afile. Fluoroxygen + C hlandla Khuhla:
It has a Iphunga obucayi limnandi;
Akukona sula isikhumba;
ehlanza ngokujulile futhi kuqinisa ikhule ezimbotsheni;
Akukona ona kobuso nobuso;
It libhekene omuhle kakhulu ukuhlanzwa umphumela.
Siyabonga nokubunjwa kwemvelo khuhla ingasetshenziswa nsuku zonke. Ikakhulukazi ezinhle umphumela izindlela has amanoni, ukuvuvukala, inkinga isikhumba, okuyinto ngomusa ehlanza futhi upholisa. Intengo 1 ibhodlela ruble 1500.
Fresh Honey Ukuhlanza Gel
Uju insipho gel kuthandwa kakhulu phakathi abathengi kanye nezinye izimonyo Christina. Izibuyekezo ngakho kukhona uchungechunge epithets laudatory, uncome indlela yokwakheka qualitative izakhiwo kakhulu ukunakekela komkhiqizo.
Soap kuqinisa kahle ikhule ezimbotsheni futhi aqabule isikhumba ukhathele; sibonga ezincane izakhiwo a sesomile ephatha ezindaweni inkinga. Ngaphezu kwalokho, Fresh Honey Ukuhlanza Gel:
It has an kakhulu yokuhlanza umphumela;
It ubhekana kahle nokukhishwa amaseli isikhumba esifile;
It has a olubucayi, iphunga elimnandi;
Liqukethe eziningi izithako zemvelo, kuhlanganise hazel akhiphe citric acid, isinkwa kungekho kuswela;
wageza kalula off;
Akukona ushiye umuzwa yobunzima emva ukuwasha.
Sebenzisa gel insipho Kunconywa massage ekuseni nakusihlwa ukukhanya kuze yesivini. Hashaza off ngamanzi afudumele. Intengo umkhiqizo yezimonyo ezimnandi ngokwanele: ruble 1100-1300 kuphela per unit.
Izimonyo "kusho uChristina" ugcwele izithako zemvelo, yingakho walithanda futhi sasimthanda abesifazane. Uchungechunge lwemfundo izimali sera etholakalayo bonke ubudala, ikhumbula Ukukhetha efanele izithako zemvelo izikhathi ezithile impilo kwesikhumba. Serum Comodex Advanced Hydrating Serum has a evelele amafutha umphumela futhi eziklanyelwe ukunakekelwa inkinga isikhumba.
Nge rehydration efanele futhi ukuzinza we-PH jikelele ezingqimbeni ezijulile epidermis ngokushesha ngangokunokwenzeka le ukuzinza zonke izinqubo. Whey akuyona kuphela aqede ukungapheleli - ukusetshenziswa kwaso ukuqhubeka kuzosiza ukukhohlwa ngazo kuze kube phakade.
Isikhumba esomile idinga umswakama. Isiza balahle okunamafutha noshukela ukusungula ukusetshenziswa ngemfanelo nezindlala sebaceous kuyinto Comodex Advanced Hydrating Serum kusukela Christina.
Izimonyo, okuyiwona amanani ziyahlukahluka phakathi 1500 - 1600 ruble, Izindleko ukonga kakhulu.
Serum is ngokushesha ugxile; e imizuzu embalwa yokuqala amantombazane ukuwuzwa esikhunjeni, kodwa ke kuvela ku ethambile, Velvety ukuthungwa.
Mattes kusho kahle futhi Isiza ukusetshenziswa ehlobo.
Isibalo ukungapheleli amaphutha esikhumbeni kuyehla, uma esetshenziswa nsukuzonke kuba umkhiqizo esiyingqayizivele yezimonyo like Christina serum. Izimonyo (Israyeli) kukhona high, futhi umkhiqizo kuwubufakazi ngokucacile leli.
Ukulungisa Line - Theraskin + HA
Lentulo amafutha lehla Line yokulungisa - Theraskin + HA eziningi uthole iseluleko beauticians abazi mayelana nazo zonke izakhiwo zabo ezinhle. Kulo, amantombazane athi umphumela ukusetshenziswa kwaleli thuluzi ngaleso sikhathi; Umphumela elithambile, beqabulekile futhi silky uma uyithinta.
"Kusho uChristina" izimonyo Israeli zenani izinga izingxenye zalo futhi ukunika yayo amaklayenti ukunakekelwa bobukhosi bangempela. Ukwakheka ngokoqobo awusibekela izingxenye anamandla - uwoyela chamomile, allantoin, acid aspartic futhi glutamic, fructose, urea, asidi i-hyaluronic. Isakhiwo izingxenye idatha kukhona omuhle kakhulu: umphumela uba isikhumba enempilo ehlanzekile kungekho imibimbi ebonakalayo kanye namaphutha.
Carrot Amafutha umswakama Cream
"Carrot Amafutha umswakama Cream - ukhilimu, okungadingi ufuna ukushintsha noma yiluphi olunye" - ngakho iqala incazelo komkhiqizo yezimonyo in iningi ukubuyekezwa. zako ekhethekile zihlanganisa kahle e ukusetshenziswa, umsungulo futhi umthelela ukususwa egcwele isikhumba esomile.
Cream ngokoqobo imbues izakhi umuntu ewusizo, ukubuyela kuye endaweni enempilo, waphumula ukubukeka. Ukwakheka iqukethe mithambo ine-elastin, collagen futhi isanqante uwoyela. Umkhiqizo ine omuhle kakhulu amafutha izakhiwo futhi kusindisa ngisho isikhumba kakhulu phezu-omisiwe ngohlelo lokusebenza ngalunye.
Ngokushesha ugxile ngaphandle kokudala stickiness umphumela.
It moisturizes kahle, kodwa imperceptible esikhumbeni.
Ngekusetjentiswa isikhathi eside, kuyasiza ukuqeda ukuvuvukala, ngisho ngaphandle ibala, ikhule ezimbotsheni emincane.
Carrot Amafutha umswakama Cream kuyinto ikakhulukazi eliphumelelayo isikhumba abasha, ukhathele ngemuva izinqubo ukunakekelwa ayilungile. Intengo yomkhiqizo - ruble 1160.
Israeli eliphezulu "kusho uChristina" Izimonyo cosmetologists wonke, ngaphandle kokukhetha, wafika engqondweni. Ubufakazi best - ukhanyisa Gommage.
Easy, mnene, exfoliating khuhla ababeyithanda owesifazane ngenxa yezizathu eziningana.
Isakhiwo kuhlanganisa allantoin, parsley akhiphe cornflower blue namanzi pink. Ngalezi izingxenye kusho it libhekene ukunambitheka engenakuqhathaniswa.
Rose amanzi - regenerates, upholisa, moisturizes.
Cornflower akhiphe - ikhuthaza isikhumba izinga bushelelezi futhi ekuqedeni ukuvuvukala kuwo.
Parsley akhiphe - uye siphungule nomphumela eqeda ukuvuvukala, izimpi ezinkulu age izindawo.
Khuhla sisetshenziswa sonke ebusweni ngaphandle endaweni ezizungeze amehlo, kugcinwe 3-4 imizuzu ke ephakamisa ngokucophelela massage ukunyakaza. imiqulu Big lokuqala, uqoqa ungqimba engenhla isikhumba keratinized, bese siveza ezimbotsheni kanye Imiphumela zanqwabelana izinto elimazayo. eliphathisa Mnene ilungele isikhumba ebucayi, kubiza ruble mayelana 1650.
Christina Muse okunomsoco Cream
It kufanela kahle ebusweni, okunomsoco isikhumba ngangokunokwenzeka ibanga amavithamini namaminerali is a eziyinkimbinkimbi okunethezeka ukuthi eyakhululwa iwuhlelo elinganiselwe esebenzisa Christina. Cream ngokushesha waqala ukuba bayindlala kakhulu: obucayi, egcwele yefilakisi akhiphe Tsvetkov Vasilka, ngokuqukethwe vitamin E uwoyela cupuaçu imbewu. Christina Muse okunomsoco Cream injabulo itholakala esikhumbeni, okwenza kube soft kanye Velvety, hhayi iphuma futhi uyasondla. Ingasetshenziselwa njengesisekelo. Inani kojeke angu 50 kuyinto ruble 3900.
Inkinga elengayo nezinkophe kalula ukuhlula Christina serum. izimonyo Professional manje ikuvumela ukuba balahle yalesi isici ezingemnandi ekhaya, futhi umphumela uba kuyabonakala emva isicelo sokuqala. Ngaphezu kwalokho, serum Forever Young Eye Rescue ubhekana kahle nemibuthano imibimbi azungeze amehlo, uyasondla futhi moisturizes isikhumba obucayi, oyenza izinqubo kumaseli. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka sokuvuselela qualitative rejuvenation kwesikhumba kule ndawo. I tube ifakwe roll elula. Serum ingasetshenziswa ebusuku noma ekuseni ngaphambi kokufaka isicelo makeup. Imali ichithwa kwezomnotho futhi kubiza ruble 1200.
Ingabe ufuna ukuba eyelashes eside futhi obukhulu? Yenza le Serum!
Uba kanjani sihle futhi ezikhangayo?
Silicone Avikelayo Hand Cream: yokusetshenziswa
Perfume Dior Homme Olukhulu: obugagu kanye nogqozi kwelinye ibhodlela
Perfume Givenchy Dahlia Divin: ipiramidi, ukubuyekezwa kwamakhasimende
Isigqamisi - kuyini?
Uhlelo Ukuze USB-flash-drive nge yefayela elingaziwa uhlelo uhlobo
Panfilov. Feat Panfilov namaqhawe ngesikhathi ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe
Kungenzeka yini ukumanzisa shot umkhuhlane? Kungakhathaliseki ukwenza lokugoma ngokumelene umkhuhlane?
Indlela ukubhaka duck kuhhavini ilayisi? Kuhle zokupheka
Futha "Nicorette": nobufakazi labo ukuyeka
Fine peonies ophuzi - indalo kahle ukwakheka
Meowth: pokemon ukuthi uyazi ukuthi ukukhuluma njengomuntu
Hong Choy Man: fighter Korean exubile yobuciko